Dhageyso: Taliyaha milatariga oo u hanjabay ciidamadii reer Muqdisho iyo fadeexaddii qabsatay oo uu... - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Taliyaha milatariga oo u hanjabay ciidamadii reer Muqdisho iyo fadeexaddii qabsatay...
Dhageyso: Taliyaha milatariga oo u hanjabay ciidamadii reer Muqdisho iyo fadeexaddii qabsatay oo uu…
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha ciidamada milatariga Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Aadan Axmed ayaa ka hadlay ciidamadii dhowaan gadoodka ka sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Ciidamadaas ayaa gadoodka ku kacay kadib markii ay soo shaac baxday in taliyaha uu mushaharkii loogu tal-galay ciidamo gaaraya 3500 leexiyey, islamarkaana ku wareejiyey ciidamo ku sugan deegaanada Puntland.
Si kastaba, hadalka taliyaha uu maanta jeediyey ayaa layaab lahaa, kadib markii uu gebi ahaanba iska indha tiray inuu ka hadlo fadeexadda isaga hareesay, taa beddelkeedna uu eedda dusha uga tuuray ciidamada xuquuqdooda raadinayey.
Maxamed Aadan ayaa sheegay in ciidamo aan badneyn ay xiisadaasi kiciyeen, iminkana ay sharciga ay wajihi doonaan, inkasta oo xiqiiqdu ahayd in ciidamada gadooday ay dhammaayeen 3,500.
Waxa uu yiri “Waxaa arrintan ka dambeeyey ciidan yar oo aan badneyn, waa naqaan waxay ay yihiin iyo halka ay joogaan, tallaabo ayaana ka qaadi doonnaa”.
Waxa uu sidoo kale u hanjabay warbaahintii shaaca ka qaaday inuu mushaharkii ciidamada uu u leexiyey Puntland.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyana weli ka hadal musuq maasuqa iyo xatooyada uu ku kacay taliyaha ciidamada milatariga, ayada oo ballanqaadkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in ciidamada aysan mushahar seegi doonin weli la sugayo in laga dhabeeyo.
Hoos ka dhageyso hadalka taliyaha